IFTIINKACUSUB.COM: Fadliga habeenka Laylatul-Qadriga.
Fadliga habeenka Laylatul-Qadriga.
Walaalhayga muslimka ahoow waxaan halkaan idiinku soo gudbin doonaa kalmado ku saabsan habeenkaas barakaysan ee Laylatul qadriga…
Allaah subxaanahu watacaalaa waxaa uu quraanka ku yiri " Waxaanu soo dejinay Quraanka habeen barakaysan, Anagoo abidba u digayna aadanaha " Suuradda Al-dukhaan , aayada 3 aad.
Waxa kaloo Allaah suuradda Al-qadar ku leeyahay " Waxaan soo dejinay Quraanka habeenka Laylatul-qadriga, oo maxaad ka ogtahay waxa uu habeenka qadarku yahay , Habeenka qadarku wuxuu ka khayr badan yahay Kun habeen, Waxaa soo dega habeenkaas Ogolaansho rabigood xagiisa ah malaa’igta iyo Jibriil oo sida xukuno oo dhan, nabad iyo samaan xag Alle ka timid ayaa habeenkaas jirta illaa iyo inta waagu ka baryayo"..
Qadriga waxaa loola jeedaa sharaf iyo waynayn, ama waxaa loola jeedaa qadarid iyo wax jaangoyn, maxaa yeelay habeenkaasi qadarku waa habeen sharaf leh oo weyn, Allaahna wuxuu qadaraa waxa ahaan doona sanadkaas, wuxuuna jangooyaa umuurihiisa xikmmadda ku salaysan.
Suuraddan waxay noo cadaysay fadliga faraha badan ee ku soo arooray habeenkan, kuwaasoo kala ah sidatan :-
1.- In Allaah uu soo dejiyay habeenkaas Qur’aanka kariimka ah oo ah hanuun loogu talagay basharka, waana kii ay ku gaari lahaayeen liibaantooda Aakhiro iyo Adduunba.
2.-Isticmaalka la isticmaalay qaabka su’aasha iyo calaamada la yaabka oo muujinaysa qiimihiisa, " Maxaad ka taqaan waxa uu yahay habeenka qadrigu?!!!!!
3.-In ay ka khayr badan tahay 1000 ( KUN ) bilood
4.-In malaa’igtu soo dagayso habeenkaas, iyagoo wada khayr, naxariis iyo barako
5.-In uu yahay habeen nabadgalyo, taasoo laga dheehanayo in addonka Allaah ee daacada si wacan u guta uu ka badbaadayo cadaabka iyo ciqaabta Allaah
6.- In Ilaahay uu ku khaas yeelay habeenkaas suurad dhan oo illaa qiyaamaha la akhrin doono.
Haddaba maxaa kula gudboon in aad samayso ?…
Walaalayaal waxaa arin haboon ah in qofka muslimka ahi ku dadaalo daacada iyo cibaadada Allaah habeenkaas gaar ahaan iyo guud ahaanba bishan barakaysan si uu fursadahaas qaaliga ah uga faa’iidaysto. Sida Abuu Hurayra ( ALLaha ka raali noqdee uu ka wernayo Nabigeena (NNKH) wuxuu yiri : Qofkii cibaado u istaaga habeenka qadriga, isagoo Alle ka cabsi iyo rumayn uu Allah rumaysan yahay u samaynaya, islamarkaana Allaah ajar ka dalbaya, waxaa loo dhaafaa dunuubtisii uu hormarsaday "
Waa goorma habeenka Laylatul-qadriga ?
Habeenka uu yahay waxaa ka jira dhowr qowl oo kala duwan, hase yeeshee sida ku cad axaadiista Nabiga (NNKH) waxaa uu ku jiraa 10ka habeen ee danbe, xikmadna looga qariyayna waxa weeye si aanay muslimiintu isu dhigan oo cibaada ku dadaalaan 10ka danbe ee Ramadaan.
Nabiga(NNKH) waxaa uu yiri: " Ka raadsha Laylatul qadriga 10ka danbe, ama sagaalka danbe" Waxaa weriayay Muslim.
Xadiis kale ayaa uu Nabigu (NNKH) ku yiri: " Ka raadsha Laylatul-qadriga 10ka danbe, haddii hurdo idinka qaalib noqoto, yaysan kula tagain 7-da danbe" waxaa weriyay Imaamu Axmed, Sheekh Albaanina wuu saxiixiyay.
Waxaa jira sida uu werinayo Muslim in C/laahi Ibnu Cabaas uu sheegay in ay tahay 27ka, sidoo kale Ubay ibnu Kacab uu ku dhaaran jiray in ay tahay 27ka.
Sidoo kale waxaa jira aqwaasha qaar tilmaamaysa inuu guurguuro oo habeenada tirada isdheer midkood uu yahay.
Isku soo wada duub oo waxaa haboon in qofka muslimka ahi aanay dhaafin cibaada 10kaas habeen, waa fursad qaali ah, waana waqti kooban, Allaah mooyaane cid kale oo og ma jirto habenkaas uu ku beegan yahay ee saxda ah, sidaa awgeed ka faa’iidayso 10kaas habeenba oo yaanay ku dhaafin, waayo haddii Allaah ku waafajiyo waxaad la mid tahay qof cibaadaysanayay 1000 habeen oo u dhiganta 83 sano iyo afar Bilood.
Hadyigii Nabiga ee Cibaadada Habeenkaas :
1.- Sida Caa’isha(Allaha ka raali noqdee) warinayso , marka 10ka danbe la galo, Nabigu(NNKH) guntiguu giijisan jiray oo loola jeedo cibaada ayuu u diyaargaroobi jiray oo haweenkiisa wuu ka dheeraan jiray, si uu cibaadada ugu faaruqo.
2.-waxaa uu ku noolayn jiray habeenkiisa salaad (Tahajud ), adkaar, quraan akhris, danbidhaaf weydiisasho, iyo ducaba.
3.- Ehelkiisa iyo reerkiisaba wuu ka jafi jiray hurdada, taas oo ku tusinaysa qiimaha uu habeenkaas leeyahay iyo sidii uu Nabigu (NNKH) ugu dadaali jiray.
4.- Wuu ictikaafi jiray Nabigu (NNKH), asxaabtiisuna way la ictikaafeen isaga iyo gadaashiisaba ( Cashar gaar ah ayaan kaga hadlaynaa ictikaafka ).Haddaba walaalaheyga muslimiinta ahoow ku dadaala ka faa’daysashada habeenkaas, wallaahi waa fursad qaali ah haddii uu Allaah ku gaarsiiyo, waana arin laga naxo in aad ka faa’idaysan wayso khayrkaas, qofkii laga xarimo khayrkeedana waa mid shalwaday oo ay u dhamaatay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii uu gaarsiiyo habeenkaas , kana faa’iidaysta oo waafaqa hadyigii Nabiga(NNKH) ee uu habeenkaas samayn jiray.
Qofka Sixran maxaa lagu gartaa?
Waa maxay sixir ?: Sixirku waa wax uu sameeyo sixiroole, una adeegsado shayaadhiin si ay ugu fuliyaan,uguna dhibaateeyaan dadka sida jidh ...
Qiso yaableh: Waraysigii gabadhii Jinniga ahayde ee Reymaa. Qaybtii 7-aad.
Waxaan halkan idiinku soo bandhigayaa , wareysi dheer oo dhexmaray aqoonyahan Abukar Albadri iyo gabadha Jiniga ah ee magaceeda la yidha...
Qiso yaableh: Waraysigii gabadhii Jinniga ahayde ee Reymaa. Qaybtii 3-aad.
Aqoonta waxa lagaga bogtaa dadaal iyo akhris.
Caan-noqotaye ,maxaad caan ku noqotay ?
Qisso cajiib ah: Denbi aanan galin ayaan lugahayga...
Qisso cajiib ah: Kalmadda Aboowe caybaan u aqaaney...
Qisso yaab-leh: Aniga iyo Aabahay waxa aanu u wada...
Duuliyaha Diyarada inoo wada sii Khamriga !!
Culimooy dadka wax ugu sheega.
Dirka koonfureed waa Isaaquun.
Maxaa Suurada ugu dheer Quraanka loogu bixiyey Al-...
Ha u guurinina waa Edab daranyahay'e!!
Saddex camal oo aan ajarkoodu xadidnayn.
Sheekh Mukhtaar Roobow Abu-Mansuur oo laga saaray,...
Shuruudo adag oo lagu xidhay cuna-qabataynta Qadar...
Aadamiga iyo Garashada.
Maxaynu maalin uun u arki weynay isaga oo af Carab...
Albaabka Dahabka ah ee ugu weyn uguna qaalisan Dun...
Tuug isku dayday inay xadaan jidhka Nabiga (scw) m...
Nin albaabka ay kusoo garaacday Xaaskiisii Xuural'...
Qiso: Indheergarad kii qudhiisa jaray!
Ma og-tahay sirtan hoos ku qoran?
Ma ogtahay, in ilmaha yari uu seddex jeer ka riyo ...
Maansadii Ramadaan dhamaataye:Waxaa tiriyey Abwaan...
Burco Ragga buur-buuran waxa loogu yeedhaa Guddiga...
Waxa la ii ogolaaday in aan Diyaarad kasta Bilaash...
Laylatul Qadrigii ma caawa ?
Dawladda Masar oo codsatay in ay ciidamo u dirto x...
Mataqanaa Qoyska ugu tirada badan wadanka Ingiriis...
Hindhisadii iga timi ayaan Xabsi ku galay!
Ninkii dilay wasiirkii Hawlaha Guud Marxuum Cabaas...
Sharaabka oo Habeenkii La Badsadaa Waxay Fududeeya...
Ma-la iska talaali karaa Cayilka iyo Buurnaanta ?
Saddex dardaaran oo ku saabsan habeenka laylatul q...
Maxay Tahay Shuruuda laga rabo qofka bixinaayo sak...
Nabigu csw waxa uu yidhi:
Wali Muraayad ma isku eegtay?
Mataqanaa waxa ay tahay Xikmad ?
Ma'dhabbaa Rag waa Raggii hore,hadalna waa intuu y...
Somaliland iyo kHaatumo oo heshiis dhaxal gal ah w...
Qisso yaableh: Waxaa i eryanaaya Laylatul qadrigii...
Calaamadaha Lagu garto habeenka Laylatul-Qadriga.
Ku dadaalka 10 ka danbe iyo laylatu qadriga.
Yaa saacadda ka dhigay 60-dan daqiiqadood?
Faa'iidooyinka Xanjada la calaashado.
Faa'idada Xab-xabka / Qaraha.
Miyaad garanaysaan sababta aan ugu biiray kooxda A...
Hargaysa oo lagu qabtay Bariis Caag ka samaysan.
Sidee loo tukadaa salat al-Janazah (صلاة الجنازة) ...
Mataqanaa cudurka Lafa-beelka ?
Kumuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Muslim ah ee gal...
Mataqanaa Saxaabiyadii ninkeedu Gaaloobaw?
Mataqanaa saxabigii Ushiisa Janada ku haysan doona...
Ma taqanaa Saxaabigii Carshiga Raxmaanku u gariira...
Mataqanaa Labadii Islamood ee astaanta u ahaa gaa...
Wax ka baro Taariikhdii Xaawa, hooyada Basharka.
Ninkii Dameerlaha ahaa ee noqday Madaxweyne!!
Nin xaaskiisa ku maxkamadeeyay in markii labaad ay...
Mataqanaa Saxaabigii cabay Caanihii Nabiga acw ?
Haweenaydii loo diiday biyaha iyo cuntadaba ee had...
Ma taqanaa Haweenaydii kunka nin u dhig-maysay ?
Wax ka baro Taariikhda dalka Jabuuti
Wax ka baro Taariikhda dalka Qatar
Taariikhda Boqortooyada Sucuudiga iyo Intii Boqor ...
Aadaabta Hadalka & Carabka
Boqorkii dawladiisa u Kitaabka furay.
Illayn Geer didisna kama darro.
Ma-og tahay in ay Timirtu daawo ka tahay 17 xalado...
Ma ogtahay in Balanbaalista cuntadeeda ugu muhiims...
Qisso yaab leh : Soomaalidu waa Dhaqan Mudan In La...
Mataqanaa saxabiigii ugu da'da yaraa saxaabadii Ra...
Mataqanaa saxabigii la kulmay labada Boqor.
Taariikhdii cajiibka ahayd ee Saxabiyadii Ummu Sa...
Iftiinkacusub.com:Maanso cusub oo la magac baxday ...
Dhaxal Sugaha Labaad Ee Boqortooyada Ingiriiska Oo...
Mataqanaa Boqorkii Allah dartii madaxnimada uga ca...
Mataqaanaa ninkii Jinka la legdemay kadibna ka bad...
Mataqanaa Sadex iyo tobanka Haween ee Jannada loog...
Sideen Nabi Muxamed ugu Sallinaa SCW?
Shimbirkii ku noolaa Beedka Shimbiraha.
Adaab xumada iyo dhibkeeda.
Hal-hayskii iyo halku-dhigyadii Deelleyda.
Wakaladaha Sirdoonka Dunida ugu xooga badan.
Maanta halgan barri ha-hagaagtee.
Qisso yaab le: Aabo Jaamacad i gee!
Inta uu leeg yahay Albaabka Janada laga galaa.
Ma Wadnaha ayaa fakara misse Maskaxda.
Maansadii "Addoon'nimo".Waxa tiriyey Abwaan,Maxame...
Qisadii labdii Doqon ee habaabay.
Erayga Meecaad ma taqaan macnahiisa.
Qisso yaab leh: Dayntii aad igu lahayd ,Baddaan ku...
Qisso Cajiib ah "Hawenaydii Dharku Diiday"
Qisso yaab leh:Aabahaa halkuu ku dhintay?
Ninka Keliya Ee Muslimka Ah Ee Ku Nool Greenland O...
Hal abuur mise hadal?
Ma naftaan hafarnaa?
Nabi Muuse CS waxa uu ahaa, nin xishood iyo astur ...
Nabi Ibraahim Xaaskisii iyo Boqor daalin ah wixii ...
Rasuulka (SCW) ayaa ku soo degay nin reer miyi ah,...